Friday, 25 March 2016 07:28
* Waxaan rumaynayaa malaa'igta Alle oo uu nuurka ka abuuray, oo u sameeyay garbo labo labo, seddex seddex, afar afar, wax ma cunaan, waxna ma cabbaan, mana hurdaan mana guursadaan, wuxuu faray shaqooyin iyo arrimo wayna sameeyaan.
* Malaa'igta waxay daa'imaan dhaacooyinka mana beenabuurtaan mana caasiyaan, Allaha ka sarreeyo ayay ka baqaan, waxaa ka mid ah qof sujuudsan laga soo bilaawo maalinta Alle abuuray samadaha iyo dhulka ilaa maalinta qiyaame, markuu madaxiisa soo qaado wuxuu oranayaa (Adaa nasahan cibaadadaada dhabta ah kumaanan caabudin).
* Iyaga waa addoomaha Alle gabdho ma ah, umana aha kaalmeeyeyaal, way u shafeecaan mu'miniinta -Alle idinkiisa- maalinta qiyaame.
* Waxaa ka mid ah kuwa ilaaliyeyaal ah oo ka ilaaliya addoomaha dhibaatada.
* Waxaa ka mid ah kuwo qoreyaal sharaf leh ah: waxay qoraan falalka addoomaha khayr iyo sharba (wanaagga iyo xumaanta).
* Waxaa ka mid ah kuwa tasbiixsada: hebeen iyo maalin ayay tasbiixsadaan mana daalaan ilaa maalinta qiyaame.
* Waxaa ma mid ah kuwa socda: waxay tagaan meelaha digriga iyo Qur'aan akhriska iyo meelaha cilmiga lagu akhriyo.
* Waxaa ka mid ah kuwa carshiga xambaara: tiradoodana waa siddeed waa khalqi weyn oo ka mid ah khalqiga Alle, shinbirka wuxuu u duulayaa midkooda dhegtiisa ilaa qoortiisa shan baqol sano.
* Waxaa ka mid ah malagga geerida: kaas oo qaada ruuxyada addoomaha Alle amarkiisa ka dib, wuxuu leeyahay caawiyeyaal.
* Waxaa ka mid ah Israafiil: oo buunka afuufaya, waxaa dhimanaya makhluuqaadka oo dhan maalinta qiyaame ka hor, ka dib mar kale ayuu afuufayaa waaba iyagoo istaagan wax sugaya.
* Waxaa ka mid ah Miikaa'iil: waa midka qaabilsan dhibicda (roobka).
* Waxaa ka mid ah Ridwaan: waa ilaaliyaha jannada, wuxuu leeyahay caawiyeyaal oo mu'miniinta jannada ugu adeega.
* Waxaa ka mid ah Maalik: waa ilaaliyaha naarta, wuxuuna leeyahay caawiyeyaal -madaxdooda waa sagaal iyo toban-, waxay haystaan budad oo bir ah, waxay ku cadaabaan gaalada naarta dhexdeeda -Ilaahay ayaan ka magangalaynaa-
* Waxaa ugu horreeya malaa'igta Jibriil: oo waxyiga anbiyada iyo rususha loo xilsaaray.
* Nabiga -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- wuxuu arkay isaga oo sidiisa ah oo xiray jihada weynaantiisa darteeda, wuxuu leeyahay lix boqol garab, waa midka ku dhuftay tuulada qoomka nabi Luud (nabadgelyo korkiisa ha ahaato) geeska garabkiisa, waxay u kacday cirka ka dib way soo gaddoontay waana la rogay, meesha korraysay hoose ayuu mariyay.
* Waxaa ka mid ah kuwa kale oo badan:
﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو﴾ ]المدثر:31 [
(ma jiro qof og ciidanka rabbigaaga isaga mooyee)
* Malaa'igta waxay jecel yihiin mu'miniinta oo Ilaahay jecel, way u duceeyaan danbidhaafna way u weyddiiyaan.
* Malaa'igta iyaga oo sidan u awood badan mu'miniinta ayay dagaalka la galaan.
More in this category: « Rumaynta Eebbe Rumaynta kutubta »